Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Booqdayaasha ayaa wajahaya xayiraadyo socdaal oo cusub oo loogu talagalay Hawaii
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Mid ka mid ah meelaha loogu dalxiiska iyo dalxiiska badan yahay Mareykanka waa Hawaii, oo loo yaqaan Aloha Gobolka. Iyada oo ay ku dhow yihiin 30,000 oo maalin kasta soo gala, hoteellada ayaa buuxsan oo caabuqyada COVID-19 ayaa ku faafaya sidii hore oo kale.
Xayiraadaha safarka cusub ee Hawaii (la cusboonaysiiyay)
Hawaii waxay maraysay tirooyinkeedii ugu badnaa ee caabuqa COVID tan iyo bilowgii masiibada. Tiradan sare waxay quus ka tahay xaqiiqda ah in 60.8% dadweynaha Gobolka si buuxda loo tallaalay.
Tirooyinka diiwaangashan ee booqdayaasha gudaha ayaa maalin walba yimaada gudaha Aloha Dawlad, haynta hoteellada, dukaamada iyo maqaayadaha oo buuxa.
Maxay dad badani u rabaan inay booqdaan Hawaii. Xitaa Maamulka Dalxiiska ee Hawaii ma garanayo oo wuu aamusnaadaa, isagoo isku dayaya inuu helo siyaabo uu uga niyad -jebiyo dalxiisayaasha inay u safraan Aloha Gobol.
CHeerarka caabuqa OVID ayaa hadda ah faraha ka baxay Gobolka Hawaii ee Maraykanka - tanina waa mid laga naxo.
"Waxaan u baahanahay inaan runtii hoos u dhigno kiiskayaga hadda illaa Maalinta Shaqaalaha, haddii kale waxaa jiri doona nolol aan loo baahnayn oo naxdin leh," ayuu Green ku yiri qoraal Facebook iyo Instagram ah saaka.
Lt. Governor Green waxaa ka dhawaajiyay gudoomiyaha Hawaii David Ige oo tilmaamay in dib-u-soo-celinta xannibaadaha laga yaabo inay ku jirto dhuunta. Wuxuu sheegay in lagu dhawaaqi karo Jimcaha. Exannibaadaha la filayo ayaa hoos u dhigi kara tirada dadka loo oggol yahay inay kulmaan, munaasabadaha, ku laallaabta xeebaha, maqaayadaha, iyo dukaamada.
Xaaladda ugu xun, waxay ku qasbi kartaa goobaha inay mar kale xirmaan.
Riix halkan si loo cusbooneysiiyo iyo in la barto waxa Guddoomiye Ige go'aansaday iyo tallaabooyinka hadda jira ee lagu yareynayo tirada fayraska.
Kani waa war xun u ah warshadaha dalxiiska ee soo koraya oo hadda ku sugan Gobolka. In kasta oo loo xiray safarka caalamiga ah, dalxiiska gudaha ayaa hadda aad u sarreeya marka loo eego tirooyinka hore ee covid-ka.
Xitaa marka si aad ah loo kordhiyo tirooyinka caabuqa, heerka dhimashadu aad buu u hooseeyay illaa hadda.
Axaddii hal qof ayaa dhintay 437 xaaladoodna waa la diiwaangeliyay, 9 qof oo dheeraad ah ayaa isbitaal la dhigay taasoo tirada dadka isbitaal dhigista ka dhigaysa 2848.
Soo koobitaankii ugu dambeeyay ee tallaalka COVID-19 ee Hawaii ayaa sheegaya in 1,784,678 tallaal tallaal lagu maamulay barnaamijyada qaybinta gobolka iyo federaalka illaa Axadda, ilaa 10,118 laga bilaabo Jimcaha. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in 60.8% dadweynaha gobolka ay hadda si buuxda u tallaalaan, 68.3% ay heleen ugu yaraan hal qiyaas.
Soo -booqdeyaashu waa inay ku aflaxaan Barnaamijka Safarka Nabdoon ka hor inta aan loo oggolaan inuu galo Hawaii.
Harlan Accola wuxuu leeyahay,
Ogosto 22, 2021 markay tahay 07:41
Markaa waxaad leedahay qaab la mid ah infekshannada sida Texas oo si aad ah uga duwan xiritaanka iyo daboolidda - markaa ma waxaad u malaynaysaa inay wax ka beddeli doonto haddii aad bilowdo inaad noqoto mid xaddidan? Waxaa laga yaabaa in qof fahmo sayniska. Waxaan qarka u saarnaa inaan baajinno safar qoys oo weyn bishii Jannaayo oo aan ku aadi lahayn Hawaii - Taasi waxay noqon doontaa in ka badan 20,000 oo lagu galo dhaqaalaha maxalliga ah - la yaab intee qof oo kale ayaa isku fikrad ah?
Kimberly Mele wuxuu leeyahay,
Ogosto 13, 2021 markay tahay 00:20
Aan dhammaanteen ku soo laabanno miiska oo aan go'aansanno guud ahaan si aan ugu laabanno gacmo -dhaqashada, iyo fayadhowrka laakiin xitaa ka sii badan, qaadashada taxaddarro dheeri ah iyo ilaalinta fogaanta. Waa run inaad ogaato: geedo iyo geedo iyo dhir udgoon badan ku dar cuntada, qorraxda geli oo samee jimicsi. Isu duceeya salaadda, oo aynu nolosheenna u soo celinno Ilaah annagoo si buuxda u xushmeynayna cidda uu yahay oo aan weydiisanno Ilaaha Wiilkiisa Ciise u soo diray inuu noo dhinto, oo weliba na badbaadiyo. Haddii aan isaga hortiisa is -hoosaysiinno, ka leexanno jidadkayagii aan hoggaaminaynay oo wejigiisa doonaynay, markaasuu samada ka maqli lahaa oo dembiyadeenna wuu cafiyi lahaa oo dalalkeenna wuu bogsiin lahaa. Aadamuhu wuxuu leeyahay qayb ka weyn inuu ka ciyaaro midnimada Eebbe. Ilaahay ha barakeeyo Ameerika ~ Hawaii iyo dhammaan qaybaha dhulka.
Aan si wadajir ah ula dagaallano✓!
Alla Bugriyev wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 08:27
Xaddidaaddu waxba tari mayso. Hawaii waxay xidhnayd bilo badan fayraskuna wali wuu badbaaday. La mid ah fayrasyada kale. Cirbadda ama maaskaro ma kaa hor istaagi doonto inaad xanuunsato, cunto caafimaad leh iyo jimicsigu waxay qaban doontaa shaqo ka wanaagsan… Isagu waa madax -bannaan yahay oo xataa hal timo madaxeeda ka dhici mayso oggolaansho la’aantiisa.
Rob wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 08:19
Iyada oo ku saleysan xogta, waa fahamkayga kororka kiisaska Covid waxaa badanaa sabab u ah dadka deggan Hawaii oo safraya oo dib ugu soo celinaya guriga.
B wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 08:14
@ Debby - Ameerika joog ?! Markii ugu dambeysay ee aan hubiyo, Hawaii waa Ameerika.